အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 17, 2017 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 17, 2017 Douglas Karr
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်သော့ချက်စာလုံးများကိုစာမျက်နှာတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းများတွင်ရှာပြီးအချို့သောရလဒ်များအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်သင့်၊ မသင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သူတို့ကိုသုံးသည်။ သော့ချက်စာလုံးများကိုသင့်တော်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏စာမျက်နှာကိုတိကျသောရှာဖွေမှုများအတွက်ရည်ညွှန်းသည် မ ကြောင်းရှာဖွေရေးအတွင်းအာမခံနေရာချထားသို့မဟုတ်အဆင့်။ အချို့လည်းရှိပါတယ် ဘုံသော့ချက်စာလုံးအမှားများ ရှောင်ကြဉ်ရန်။
စာမျက်နှာတိုင်းသည်တင်းကျပ်သောသော့ချက်စာလုံးများစုဆောင်းခြင်းကိုပစ်မှတ်ထားသင့်သည်။ ကျနော့်အမြင်အရဆိုလျှင်သင့်တွင် ၃ မှ ၅ အထိထက် ပို၍ ပစ်မှတ်ထားသောစာမျက်နှာတစ်ခုရှိသင့်။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်မှုရှိသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် 'စာပို့စာရင်း' နှင့် 'တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရင်း' သည်ဘာသာရပ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်နေပြီးစာမျက်နှာရှိတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ညှိနှိုင်း။ အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်၏စာမျက်နှာသည်အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိဘဲစကားဝိုင်းများကိုပြောင်းလဲစေသောအကြောင်းအရာများကိုသာအာရုံစိုက်သင့်သည် သောအကြောင်းအရာတစ်လျှောက်လုံးသော့ချက်စာလုံးများကိုထည့်။ သော့ချက်စာလုံးများကိုသဘာဝအလျောက်အသုံးပြုခြင်းသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ သို့အတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်သော့ချက်စာလုံးများကိုတွေ့မြင်နိုင်သော်လည်း visitors ည့်သည်များကမူသေချာပေါက်မမြင်ရပါ။ ပါ ၀ င်မှုကပြောင်းလဲမှု (အရောင်း) ကိုမောင်းတယ် - ဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းရေးပါ။
ငါတော့ဘူးများအတွက်အသုံးပြုသောတစ်ခုတည်းသော tools များ keyword ကိုသုတေသနပြု များမှာ Semrush နှင့် BuzzSumo။ BuzzSumo သည်အကြောင်းအရာလူကြိုက်များမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသည် Semrush အကြောင်းအရာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။ နှစ်ခုသည်အမြဲတမ်းအတူတူမဟုတ်ပါ။ ဘေးကင်းစွာစာရင်းစစ်များနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် tools တွေကို၏, Semrush သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အရေးအကြီးဆုံးသော့ချက်စာလုံးများကိုဖော်ထုတ်ရန်အလွန်မယုံနိုင်စရာအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်သည်။ ဒီနေရာမှာဒီကိရိယာကိုကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့နည်းတချို့ - \_ t
ဒိုမိန်းသော့ချက်စာလုံးများ - ကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုသူတို့အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီးသောသော့ချက်စာလုံးများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဖြည့်စွက်နိုင်သည်အကြောင်းအရာအပြောင်းအလဲများနှင့်မြှင့်တင်ရေးကဲ့သို့သောဗျူဟာများရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်၏အစီရင်ခံစာများကိုကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်သည်။
ဆက်စပ်သောသော့ချက်စာလုံးများ - ကျွန်ုပ်ပစ်မှတ်ထားလိုသောသော့ချက်စာလုံးများကိုရှာဖွေသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုရရှိနိုင်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးများ၏အခြားပေါင်းစပ်မှုများကိုဖော်ထုတ်ရန်ဆက်စပ်သောသော့ချက်အစီရင်ခံစာများကိုကျွန်ုပ်စတင်ခဲ့သည်။
ကွာဟချက်အားသုံးသပ်ခြင်း - Semrush သင် domain များစွာကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပြီးသင်အခြား domain များနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ယှဉ်ပြိုင်နေသည်ကိုခွဲခြားသိနိုင်သည့်တကယ့်အလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ချက်တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ပြိုင်ဘက်များကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေခြင်းမပြုရသေးသောသော့ချက်စာလုံးများကိုကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
ဒိုမိန်း - သင်၏ဒိုမိန်းအမည်တွင်သော့ချက်စာလုံးများရှိပါက၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ မရလျှင်, ထိုအဖြစ်ကောင်းစွာပွင်။ သင်သည်ဒိုမိန်းကို ၁၀ နှစ်ကြာမှတ်ပုံတင်ထားကြောင်းသေချာပါစေ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် spam site မဟုတ်ကြောင်းနှင့် Google သည်၎င်းကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်အရှည်ဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဒိုမိန်းငယ်တစ်ခုသည်အတိတ်ကာလကအလားတူအသုံးအနှုန်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ဖူးသည့်အာဏာပိုင်များထက်အခွင့်အာဏာနည်းသည်။ သင်သည်ဒိုမိန်းအသစ်တစ်ခုကိုမရှာမှီ၊ အခြားသက်ဆိုင်ရာဒိုမိန်းများမှလေလံပွဲအချို့ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုပါ။
မူလစာမျက်နှာစာမျက်နှာခေါင်းစဉ် Tag - သင်၏ပင်မစာမျက်နှာခေါင်းစဉ် tag ၌သင်၌လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းအချို့ရှိသည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပြီးသင်၏ကုမ္ပဏီနာမည်ရှေ့တွင်ထည့်ပါ။
ခေါင်းစဉ် Tag - သီးခြားလွတ်လပ်သောစာမျက်နှာတစ်ခုစီတွင်ထိုစာမျက်နှာပါအကြောင်းအရာများအဓိကထားသောသော့ချက်စာလုံးများရှိသင့်သည်။
Meta Tags များ - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှသော့ချက်စာလုံး tag ကိုလျစ်လျူရှုပြီးသင်၏စာမျက်နှာဖော်ပြချက်တွင်အသုံးပြုထားသောသော့ချက်စာလုံးများကိုလျစ်လျူရှုထားသည်။ သို့သော်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်သော့ချက်စာလုံးကိုရှာဖွေသောအခါရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်စာမျက်နှာတွင်စာလုံးမည်းဖြင့်ရေးထားသည်။ သို့မှသာရှာဖွေသူအသုံးပြုသူသည်သင်၏ရလဒ်ကိုနှိပ်နိုင်သည်။
Tags: ဦးတည် - HTML တွင်ခေါင်းစဉ်များနှင့်ခေါင်းစဉ်ငယ်များရှိသည်။ ဤရွေ့ကားအထူးဖြစ်ကြသည် , , အရေးပါမှု၏နိုင်ရန်အတွက် tags များ။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေကဒီ tags တွေကိုဂရုပြုပြီးသင်စာမျက်နှာတွေကိုဖန်တီးပြီးသော့ချက်စာလုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ကိုဂရုစိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ ဘလော့ဂ်ပို့စ်များအတွက်၊ သင့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်ခေါင်းစဉ်များတွင်သော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးပြုပါ။ အသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ပါ , သို့မဟုတ် သင့်ရဲ့ sidebar မှာ tags များ။
ရဲရင့်ခြင်းနှင့်စာလုံးစောင်း - စာလုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်၌သင်၏သော့ချက်စာလုံးများကိုစာလုံးမည်းနှင့်စာလုံးစောင်းထားပါ။
ပုံ Alt နှင့်ဖော်ပြချက် - သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာများ (သို့) ပို့စ်များတွင်ပုံတစ်ပုံ (အကြံပြုထားသည်) ကိုသင်အသုံးပြုသောအခါ၊ ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဖော်ပြချက်အညွှန်းများတွင်သော့ချက်စာလုံးများကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချပါ။
Internal Links များ - သင့်ဆိုဒ်အတွင်းရှိအခြားစာမူများသို့မဟုတ်စာမျက်နှာများကိုသင်ဖော်ပြပါကထိုအကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်သော link ၏ကျောက်ဆူးစာသားနှင့် anchor tag ၏ခေါင်းစဉ် tag တွင်သော့ချက်စာလုံးကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုရန်သေချာစေပါ။
'read more' သို့မဟုတ် 'here here' ကဲ့သို့သောယေဘူယျအသုံးအနှုန်းများကိုရှောင်ပါ။
အကြောင်းအရာ၏ပထမ ဦး ဆုံးစကား - သင်၏စာမျက်နှာသို့မဟုတ်ပို့စ်တွင်ပထမဆုံးစာလုံးများသည်ထိုစာမျက်နှာအတွင်းရှိအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောသော့ချက်စာလုံးများပါဝင်သင့်သည်။
စာမျက်နှာ၏ထိပ် - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်စာမျက်နှာကိုကြည့်။ အကြောင်းအရာကိုအပေါ်မှအောက်သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်၊ စာမျက်နှာ၏ထိပ်သည်အရေးအကြီးဆုံးအကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးစာမျက်နှာအောက်ခြေသည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင့်တွင် columnar layout တစ်ခုရှိပါကသင်၏အခင်းအကျင်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည့်သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏အကြောင်းအရာများ၏ကိုယ်ထည်ထက်ကော်လံများသည်သင်၏ HTML ၌နိမ့်ကျသည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုမှု - သင်၏အကြောင်းအရာအတွင်း (စလူသိများသည်။ ) keyword သိပ်သည်းဆသင်၏အကြောင်းအရာအတွင်း၌သော့ချက်စာလုံးများကိုသဘာဝအတိုင်းအသုံးပြုရန်အရေးကြီးသည်။ သက်ဆိုင်ရာဝေါဟာရများကိုရှာဖွေရာတွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည် ပို၍ ရှုပ်ထွေးလာသည် တူညီသောစကားစုအတိအကျကိုပြန်ပြောစရာမလိုပါ။ သင်၏အကြောင်းအရာသည်သဘာဝကျပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိစေရန်အမြဲတမ်းလုပ်ပါ။ အလွန်အကျွံသုံးထားသည့်အကြောင်းအရာများသည်သင်တွေ့ရှိနိုင်သော်လည်း၎င်းကိုသင့်အားရောင်း။ မရပါ။
ဒီမှာအခြားမှတ်စုတစ်ခု ... သော့ချက်စာလုံးများသည်မကိုက်ညီပါ။ ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုစကားလုံးများနှင့်အဓိပ္ပါယ်တူစကားလုံးများသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ သင်သုံးပါကသင်၏အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရေးပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုတွင် ပို၍ ရှာဖွေနိုင်သည်။ ဒီ post ရဲ့ဥပမာမှာကျွန်တော်က term တွေကိုသုံးတယ် သော့ချက်စာလုံးအသုံးပြုမှု, ဒါပေမယ့်ငါသည်လည်းတူသောအသုံးအနှုန်းများကိုအသုံးပြုပါ SEO ဆိုသည်မှာ, keyword သိပ်သည်းဆ, အကြောင်းအရာ, ခေါင်းစဉ် tags များ... ခေါင်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သော်လည်းဤစာမူကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက်ရှာဖွေနိုင်သည့်အသုံးအနှုန်းများ။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူများသည်ရလဒ်များကိုကျဉ်းမြောင်းစေရန်မေးခွန်းများနှင့်အခြားစကားစုများအပါအ ၀ င်သော့ချက်စာလုံးများပေါင်းစပ်မှုများကိုပိုမိုကြာရှည်စွာစာရိုက်နေကြသည်ကိုသတိပြုရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ ဒီတော့သော့ချက်စာလုံးသည်စကားလုံး ၁ လုံးမှ ၂ ကန့်သတ်ချက်မဟုတ်ပဲဝါကျတစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင်ပေါင်းစပ်မှုကြာရှည်လေ၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုပိုကောင်းလေလေယာဉ်အသွားအလာပိုမိုဆီလျော်လေလေ visit ည့်သည် ပို၍ ပြောင်းလဲလေလေဖြစ်သည်။
သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာသို့သော့ချက်စာလုံးများဖြင့်ပြင်ပဆက်သွယ်မှုများကိုရရှိနိုင်လျှင်ပိုကောင်းသည်။ ဒီ post ဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ on-site keyword ကိုသုံးတာပါပဲ။
သော့ချက်စာလုံးများသည်သူတို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၏အရေးပါသောတိုးချဲ့မှုဖြစ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ စနစ်တကျအသုံးပြုသောအခါ၊ သော့ချက်စာလုံးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရှာဖွေမှုရလဒ်များနှင့်အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုသို့အသွားအလာတိုးစေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအားငွေပေးချေသောဖောက်သည်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်အခွင့်အလမ်းပိုများသည့်အလားအလာများကိုဆွဲဆောင်ရန်ကူညီပေးသည်။ ကျန်းမာစီးပွားရေးတည်ဆောက်သူ
ဒီနေရာတွင် Healthy Business Builder မှအချက်အလက်များ၊ သော့ချက်စာလုံးများသည်သင်၏အွန်လိုင်းအရောင်းအတွက်အဘယ်ကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသနည်း:
ထုတ်ဖော်: ငါသည်ငါ့အ Affiliate link ကိုအသုံးပြုနေသည် Semrush ဆောင်းပါးထဲမှာ။
Tags: အခြားရွေးချယ်စရာစာသားရဲရင့်ဒိုမိန်းသော့ချက်စာလုံးများအလေးအနက်ထားကွာဟမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာheader tagsပင်မစာမျက်နှာပုံ altစာလုံးစောင်းသော့ချက်စာလုံးယှဉ်ပြိုင်မှုkeyword ကိုသုတေသနပြုသော့ချက်စာလုံးအသုံးပြုမှုသော့ချက်စာလုံးတွေmeta သော့ချက်စာလုံးများoptimizationsemrushseoအားကြီးသောခေါင်းစဉ် tags များ
နိုဝင်ဘာလ9ရက် 2009 ခုနှစ် ညနေ 10:18 နာရီ
ဒီအကြောင်းအရာက Douglas ကြီးပါပဲ။ ဆိုဒ်များစွာ၊ ပြောင်းလဲနိုင်သောများစွာသော၊ နှင့် ဗားရှင်းများစွာတို့ကြောင့် SEO နယ်ပယ်အကြောင်းကို စတင်လေ့လာသူတိုင်းအတွက် စိတ်ရှုပ်ထွေးစေပါသည်။ ဒါပေမယ့် အရေးကြီးတဲ့အရာနဲ့ မဟုတ်တဲ့အရာကို သင် တိုက်ရိုက်သွားခဲ့တယ်။ တစ်ချို့က “အချက်” လို့ ခေါ်ကြတယ်! ကျ​နော့်​ရဲ့ peeps ​တွေနဲ့ share ရတာ​သေချာပါတယ်​။ – ပေါလု
10:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 2, 46
အရမ်းကောင်းတာပဲ PJ! 'အော်မြည်သံ' ကို ကြားခဲ့ရပြီး ပို့စ်တွင် ထည့်သွင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ (မင်းပိုက်ဆံအိတ်အပြင်) ဘာမှမထိခိုက်ဘူးထင်တယ် အချိန်ပေးပြီး တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
11:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 2, 29
နံပါတ် ၁ က တကယ်မှန်လား အဲဒီအပေါ်မှာ ရောထွေးတဲ့ အမြင်တွေ ကြားဖူးတယ်။ 1 နှစ်သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်၏ဒိုမိန်းများအားလုံးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းတို့အား 1 နှစ်အထိ မတိုးချဲ့ဘဲ ကျွန်ုပ်၏ အဓိကစီးပွားရေးနယ်ပယ်များတွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမှန်တကယ် လှည့်စားနေပါသလား။
11:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 2, 55
PJ သည် ကောင်းမွန်သော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအချို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းကို အငြင်းပွားသည့် Google မှ တိုက်ရိုက်ဆောင်းပါးအချို့ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် - ငါအဲဒါကိုအရမ်းစိုးရိမ်နေမယ်မထင်ဘူး။ ငါအဲဒါကိုလုပ်တုန်းပဲ…ဒါကအလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုလို့ငါထင်ပြီး ငါ့မှာပိုက်ဆံမရှိတဲ့အခါ သူတို့အမြဲတမ်းကုန်သွားတာကိုမုန်းတယ်။
မေလ 9, 2013 မှာ 5: 18 pm တွင်
ဆောင်းပါးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃.၅ နှစ်က ရေးခဲ့တာတောင်မှ သက်ဆိုင်ပြီး အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ အချက်အလက်ပါ။
မေလ 9, 2013 မှာ 8: 22 pm တွင်
သက်ဆိုင်နေသေးသော်လည်း ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်မှုနည်းပါးပြီး ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာကို ဖန်တီးခြင်းအပေါ် ပို၍အလေးပေးမိပေမည်။ Google သည် မည်သည့်နေရာတွင်ရှိရန် လိုအပ်သည်ကို ရှာဖွေမည်ဖြစ်သည်။
သြဂုတ် 29, 2013 မှာ 7: 32 AM
သြဂုတ် 20, 2015 မှာ 5: 29 AM
အံသြစရာကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါး၊ ဒီနေ့ ၃-၄ နှစ် မတိုင်ခင်ကနဲ့ အတူတူပါပဲလို့ တွေးမိပါတယ်။
သြဂုတ် 20, 2015 မှာ 10: 15 AM
အများစုအတွက်ကတော့ အရေးကြီးနေသေးတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် သင့်စာဖတ်သူအတွက် စာရေးခြင်းကို အားပေးပြီး SEO သော့ချက်စာလုံးကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၏ စက်ပြင်များကို အာရုံစိုက်ခြင်းမပြုပါ။ ဤနည်းဗျူဟာများသည် သင့်အား တိကျစွာ အညွှန်းကိန်းရရှိရန် ကူညီပေးနိုင်သော်လည်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ထိုအကြောင်းအရာ၏ လူကြိုက်များမှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။ သင့်တွင် ကောင်းမွန်သော၊ ကြွယ်ဝသောအကြောင်းအရာများရရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် 2015 ခုနှစ်တွင် အဓိကစကားလုံးနေရာချထားခြင်းထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ Google သည်ယခင်ကပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရာများထက် ယနေ့ခေတ်တွင် ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်မှုအသုံးအနှုန်းများကို အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
ရစ်ချတ် Lewis က
19:2017 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 04
သော့ချက်စကားလုံးများသည် SEO တွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ လူအတော်များများသည် မှန်ကန်သောသော့ချက်စာလုံး သုတေသနနှင့် နေရာချထားမှုတို့ကြောင့် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင် ကောင်းစွာ အဆင့်သတ်မှတ်ရန် ပျက်ကွက်ကြသည်။ သို့သော်၊ သင်၏ပို့စ်ကြောင့်၊ စတင်သူများပင်လျှင် Keyword Optimization ၏ အနုပညာကို ကျွမ်းကျင်နိုင်ပါပြီ။ ဆောင်းပါးကောင်း။ တကယ်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။